daaweynta avgiftning : avgiftning si dabiici ah : Barnaamijka avgiftning : cunto avgiftning guriga - kaamil ah caato ah barnaamijyada avgiftning dabiiciga ah
daahirintiisa iyo naanin
qorshayaasha avgiftning caafimaad
Barnaamijka avgiftning caafimaad
Barnaamijyada avgiftning dabiiciga ah
cuntada dabiiciga ah ee miisaanka oo yaraada
Barnaamijka Tababarka Miisaanka - caafimaad qabo iyo Fit Raadinta ikhtiyaarka ugu fiican
Dhegayso Post this
Haddii aad qabto barnaamijka tababarka miisaan la heli karo ugu wanaagsan, jirkaaga hagaajinaysaa ay madaale dhakhso iyo xoog jidheed. Waxaa intaa dheer, lafahaaga xoojiyo by fulinaya waxyaabaha dhabta ah.
Marka hadalka ku saabsan faa'iidooyinka tababarka miisaanka, dad badan bilaabaan in ay ka faa'iidaystaan ​​ka mid ah. Maalmahan, ma aha oo kaliya in ciyaartoyda ay ka faa'iideysanayaan noocan ah ee tababarka. Xitaa dadka waawayn ay celcelis ahaan hadda isticmaalayso barnaamijkan si ay u horumariyaan muruqyada caafimaad iyo ciribtirka dufanka aan la rabin ee jirka.
Haddii aad qabto barnaamijka tababarka miisaanka ugu fiican, jirkaaga hagaajinaysaa ay madaale dhakhso iyo xoog jidheed. Waxaa intaa dheer, lafahaaga xoojiyo by fulinaya waxyaabaha dhabta ah. Nasiib darro, dadka qaar ku dhacdaa dhaawac aan la rabin sababtoo ah kor u miisaanka aad u badan. Xusuusnow in xataa haddii aanad isticmaalin miisaanka culus, waxaadna ku gaari kartaa mudada taam ugu fiican si aad u caafimaado.